गगन-अञ्जनाको प्रेम : गलत म्यासेजले यसरी भयो विवाह सम्भव – " सुलभ खबर "
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं पूर्वमन्त्री गगन थापा नेपाली राजनीतिमा लोकप्रिय नेताहरुमध्ये पर्छन् । गलत म्यासेजका कारण उनकी जीवन साथी अञ्जना केसीसँग थापाको पहिलो पटक कुराकानी भएको थियो ।आज फेब्रुवरी १४, हामीले गगन-अञ्जनाको पहिलो भेटवार्तादेखि विवाहसम्मको विषयमा जानकारी दिँदैछौँ । कसरी भयो त गलत म्यासेजबाट विवाह सम्भव ?
गलत म्यासेजले पहिलो पटक कुराकानी
अञ्जनासँग मेरो संयोगले पहिलो कुराकानी भएको थियो । उनी र मबीच एउटा गज्जबको संयोग छ । दुवैजनाको जन्मदिन एकै दिन हो । उनी मेडिकल डक्टर हुन् । मेडिकल डक्टर सकेपछि उनी केही समयमा अमेरिका बसिन् ।
हाम्रो पहिलो कुराकानी संयोगले भएको हो । आन्दोलनको समयमा एउटा गलत म्यासेजका कारण उनीसँग मेरो पहिलो पटक कुराकानी भएको थियो । त्यसको केही समयपछि अर्जुननरसिंह केसीको छोरी भन्ने थाहा भयो ।
अञ्जनाले मलाई चिने पनि मैले नचिनेको रहेछु । आन्दोलनको समयमा हामी लुकेर बसेका थियौँ । त्यहीँ बेलामा उनले आफ्नो बहिनीलाई अमेरिकामा युएसएमएली भन्ने इक्जामको नम्बर कति आयो भनेर हेर्नका लागि टेक्स पठाएकी रहेछन् । त्यो म्यासेज मेरोमा आइपुग्यो ।
मैले सरी यो गलत नम्बर भनेर टेक्स पठाएँ । तर मलाई उनी को हुन् भन्ने थाहा थिएन । उनको बावुको मोबाइलमा मेरो नम्बर सेभ थियो होला, सायद त्यहीँ भएर झुक्किएको हुनुपर्छ । त्यसपछि उनले थाहा पाइन् यो गगनको नम्बर भन्ने ।
त्यसपछि मलाई जिस्काएर म्यासेज आउन थाल्यो । मैले कहिले काहीँ मात्र रेस्पोन्स गर्थें । मैले फेक भन्ने थाहा पाइसकेको थिएँ । त्यही पनि रमाइलो । यो उमेरमा कोही केटीहरुले फल्ट गरिरहेको छ भन्ने लागेको थियो मलाई । रमाइलो पनि लाग्यो, ठिकै छ भनेँ ।
आन्दोलनकै क्रममा बबण्डर भयो । उनले घरमा टियर ग्यास छिरेर हजुरआमालाई लाग्यो भनिन् । त्यो बेलासम्म मैले चिनेको थिइनँ । त्यो भनेपछि भने मैले अर्जुननरसिंह केसीको घरमा टियर ग्यास लागेको थाहा पाइहालें । किनभने मैले पत्रपत्रिकामा पढेको थिएँ ।
यस घटनापछि उनी अर्जुननरसिंह केसीको छोरी हुन् भन्ने थाहा भयो । तर‚ कति जना छोरी छन् र उनी कुन् भन्ने थाहा थिएन ।आन्दोलन सकिएपछि हामीबीचमा टेक्स हुँदै फोनमा पनि कुराकानी हुन थाल्यो । बिस्तारै जन्मदिन एकै दिन भएकाले बर्थ डेमा भेटौँ न भन्ने भयो । वैशाखमा आन्दोलन सकियो । साउन ४ गते हाम्रो जन्मदिन हो ।
साउन ४ गते हामीले भेट्यौँ । यो भेट रमाइलो लाग्यो । बिस्तारै नजिकका साथी हुन थाल्यौं । गफ पनि बढ्न थाले । उनी आफ्नो करियर अगाडि बढाउन पढ्न बाहिर गइन् । म यहीँ रहेँ । हामीबीच कुराकानी भने चलिरह्यो । एक समयमा पुगेपछि मलाई मेरो लाइफ पार्टनर हुन्छ भन्ने लाग्यो । उनलाई पनि त्यहीँ लागेको रहेछ ।हामीले सल्लाह गर्‍यौं । उनी अमेरिकाको करियर छाडेर नेपाल आइन् । संविधानसभाको निर्वाचनलगत्तै हामीले विवाह गर्‍यौं । विवाहपछि उनी युके पुगिन् । त्यहाँबाट मास्टर पढेर फेरि उनी नेपाल आइन् । उनी पब्लिक हेल्थमा गइन् । उनी अहिले सेभ द चिल्ड्रेनमा काम गर्छिन् ।
हाम्रो अर्को पनि संयोग छ । पहिलो छोरी गारगी अहिले साढे आठ वर्षकी भइन् । अर्की छोरीको जन्म पनि एकै दिन भयो । मेरी दुईवटै छोरीको जन्म एकै दिन भयो ।अहिले हामी बाआमासँग बस्छौँ । मेरा बा र आमा मेरो ठूलो शक्ति रहनुभयो । मेरो दाइ, भाइ, मेरो परिवार र मलाइ सबैको सहयोग मिल्यो । आज म जुन ठाउँमा छु, त्यसको ठूलो बल परिवारबाट आएको हो । विवाहअगाडि जुन तागत थियो, अञ्जना भित्रिएपछि दोब्बर भएको छ । धेरै खुसी परिवारमा छ ।
नुवाकोट । लोक गायिका टिका सानुले झण्डै १० महिनापछि स्टेज कार्यक्रम गरेकी छन् । लकडाउनपछिको
नायिका स्वेता खड्का र विजयेन्द्र सिंह राउतले मंसिरको २२ गते बिहे गरे । ३ दिन
अनमोल केसी कति पढेका छन्, कति छ उनी संग सम्पति
काठमाडौ – अनमोल के सी नेपाली फिल्म जगतमा पछिल्लो पुस्ताका अत्याधिक चर्चित, व्यस्त र सबैभन्दा
काठमाडौं । अभिनेत्री स्वेता खड्का र विजयन्द्र सिंह रावतको विवाहको भोज आज काठमाडौमा भव्यताका साथ
कसैले यति सानो उमेरको श्रीमती ल्याउछन्, समान्य मानिस देखि राजनीतिज्ञ या सेलिब्रेटीहरुले पनि आफू भन्दा
५ बर्षमै दुनियाँ चकित पार्दै यी बालिका, यति सानो उमेरमा यस्तो अचम्मको प्रतिभा !
काठमाडौ । अहिलेको जमाना भनेको इन्टरनेट र प्रबिधिको जामाना हो यसस“गै चल्न सकिएन भने हामी